Manambana Basy Ny Lohan’ny Haino Aman-jery i Torkia Amin’izao Fifidianana Efa Akaiky Izao · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraAhmet A. Sabancı
Voadika ny 09 Oktobra 2015 7:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Ελληνικά, čeština , English
Rahonan'ny polisy ny olom-pirenena mpitati-baovao ao amin'ny fahitalavitra Özgür Gün, Murat Demir sy ny mpitati-baovaon'ny DİHA, Serhat Yüce. Lahatsary tao amin'ny YouTube.
Efa akaiky ny fifidianana ao Torkia amin'ny 1 Novambra hoavy izao ka miatrika dingam-pandrahonana vaovao ao anatin'ny rivotra anjakan'ny tahotra sy ny herisetra indray ny mpanao gazety ao amin'ny firenena.
Tao anatin'ny herinandro tamin'ity volana Oktobra ity, niharan'ny daroka i Ahmet Hakan sy Serhat Yüce, samy mpanao gazety ka niteraka tabataba noho ny tsy fisian'ny fiarovana ny mpanao gazety ao amin'ny firenena izany. Ny fanafihana an'i Hakan nataona andian-jiolahimboto mpikambana ao amin'ny antokon'ny fitondrana Torkia no tena malaza indrindra teo amin'ireo mpiserasera ao amin'ny media sosialy. Marobe ihany koa no nanameloka tanteraka ny herisetran'ny polisy tamin'i Yüce izay nitranga tamin'ny 5 Oktobra.
Mihamafy ny tsindry mahazo ny mpanao gazety alohan'ny fandatsaham-bato izay antenain'ny antokon'ny fitondrana AKP (Rariny sy Fampandrosoana) fa hanome azy ny maro an'isa katsahiny mafy. Somary nihena ny hery ara-politikan'ity antoko ity taorian'ny fifidianana tamin'ny volana Jona izay nitarika ny fivakisan'ny parlemanta sy fifidianana alohan'ny fotoana, ary nanome toerana ny mpanohitra izay toy ny iray amin'ireo zava-bitany tsara indrindra tao anatin'ny folo taona – atahorana hirodana ny dinam-pandriampahalemana iarahana amin'ny Kiorda.
Manoloana ny tolona mitam-piadiana Kiorda sy ny fitomboan'ny herisetran'ny governemanta amin'ny mpiray tanindrazana, atahorana iharan'ny herisetra mora foana ireo mpanao gazety mampiasa tsikera goavana ao amin'ny fanadihadiana sy fitateram-baovao momba ny zavatra ataon'ny Filoha Recep Tayyip Erdoğan sy ny antokony AKP .
Antokon'ny fitondrana mifanandrina amin'ny vondrona Media Doğan
Mivandravandra fa kendren'ny fampieleza-kevi-baovao sy ny fandrahonana ara-batana ihany koa izao ny haino aman-jery mahazatra izay efa nikendrena ny Kiorda sy ny haino aman-jery ankavia.
Doğan Media, izay ahitana ireo sampam-baovao manintona tahaka ny Vaovao Isan'andron'i Hürriyet sy Hurriyet, Posta, fantsona TV Kanal D, CNN Türk, sy tv2 no iray amin'ireo vondrona haino aman-jery lehibe indrindra ao Torkia. Mogul Aydın Doğan no tompony, miasa hatrany ho vondrona goavan'ny fampitam-baovao mahazatra ny vondrona, misoroka ireo lohahevitra saro-pady ary miezaka ny tsy mitanila.
Saingy niharan'ny teritery i Doğan talohan'ny fifidianana tamin'ny 7 Jiona, raha noravain'ny fahatongavan'ny Antoko Demaokratim-bahoaka mpanohana ny Kiorda (HDP) ny fikasan'ny AKP hanjakazaka amin'ny fifidianana parlemanta manaraka. Tamin'ny fifaninana amin'ny fifidianana, nanome fandaharana hoan'ireo mpikambana ao amin'ny HDP sy ny filohany Selahattin Demirtaş ilay vondrona [fampitam-baovao].
Tsy tian'ireo nasionalista izay nanafika ny vondrona haino aman-jery izany ary nilaza fa “mampiroborobo” ny fisintahan'ny Kiorda sy “manohana fampihorohoroana”.
Taorian'ny fifidianana, nanomboka nandray fepetra i Doğan. Araka ny nolazain'ny mpanao gazety iray, nanjaka manerana ny tambajotra ny fanivanan-tena. Tsy nipoitra tamin'ny fandaharan'ny vondrona Doğan intsony ireo vahiny avy amin'ny HDP.
Na dia hita fa tsy misy dikany aza izany fepetra izany. Notafihan'ny vahoaka tamin'ny vato sy langilangy ny foiben-toeran'ny vondrona Doğan, ny gazety lohalaharana mivoaka isan'andro Hurriyet ao Istanbul, tamin'ny alin'ny 6 Septambra sy 8 Septambra, vahoaka izay nokaramain'ny solombavambahoakan'ny AKP sady filohan'ny Tanora AKP, Abdurrahim Boynukalın, izay nanao lahateny fandrahonana ampahibemaso teo anoloan'ny ny biraon'ny Hurriyet.
Tsy voasazy tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny fikarakarana ity fihetsiketsehana tsy ara-dalàna ity i Boynukalın.
Voadaroka teo anoloan'ny tranony i Ahmet Hakan
Nitohy ny fanafihana ny Doğan Media sy ny mpanao gazetiny raha nodarohan'ny olona miisa efatra teo anoloan'ny tranony ilay mpanolotra fandaharana malaza Ahmet Hakan Coşkun, izay voalaza fa tapaka ny orony sy ny taolan-tehezany. Taorian'ny famotorana, fantatra fa mpikambana ao amin'ny AKP ny telo tamin'ireo mpanafika. Nilaza avy eo ny AKP fa noroahina tao amin'ny antoko izy ireo.
Mpanohana ny AKP sy Erdoğan tany am-boalohany i Hakan no nanjary nitsikera azy ireo taty aoriana, satria niha-kaonservativa sy tsy refesi-mandidy ny AKP. Nanamarika izany fiovana izany ireo mpanoratra ao amin'ny gazety mpomba ny AKP tahaka ilay mpamakafaka Cem Küçük, izay niampanga am-pahadisoana an'i Hakan ho manohana ny Antokon'ny Mpiasa Kiordistana izay manome lanja ny fahaleovantena Kiorda manoloana an'i Torkia.
Nanoratra tao amin'ny gazety Star izy:
Tahaka ireo mararin'ny fikorontanana ara-tsaina, mihevitra ianao [Hakan] fa mbola miaina amin'ny andro nitondran'i Hürriyet ny firenena. Afaka mamotipotika anao toy ny lalitra izahay raha tianay izany. Feno famindram-po izahay hatramin'izao ary mbola velona ianao.
Natonta iray volana latsaka talohan'ny nanafihana azy ireo teny ireo.
Na dia nanameloka ny fanafihana aza ny ankamaroan'ny fikambanana mpanao gazety sy ny haino aman-jery, niezaka nanome tsiny ny hafa ny haino aman-jery mpanohana ny AKP. Nankalaza ny zava-nitranga mihitsy aza ireo vondrona ao amin'ny media sosialy fantatra amin'ny anarana hoe AKTrolls (mpiserasera tsy fantatra anarana mpomba ny AKP, mavitrika ao amin'ny Twitter ny ankamaroany):
Kaonty twitter tsy fantatra anarana mifandray akaiky amin'ny lapa (mpanohana an'i Erdogan) taorian'ny fanafihana ilay mpanao gazety Ahmet Hakan amin'izao fotoana izao
Mitohy ny fanafihana ny haino aman-jery Kiorda
Anisan'ny endri-javatra hafa amin'ny fahanginana tsy mitsaha-mitombo eo amin'ny tontolon'ny haino aman-jery ao Torkia ny fanampenam-bava ny sampam-baovao Kiorda noho ny fanampian'ny mpitandro ny filaminana ao Torkia. Roa andro monja talohan'ny nanafihana an'i Ahmet Hakan, nosavain'ny polisy ny tranobe misy ny masoivohom-baovaon'ny Kiorda DIHA sy ny gazety amin'ny teny Kiorda, Azadiya Welat.
Nitranga tsy misy didy ny fisavana tamin'ny tolakandron'ny 28 Septambra. Nisambotra mpanao gazety teo amin'ny 30 eo ny polisy, anisan'izany ireo tonian-dahatsoratra sy mpanao gazety notànana izay nilaza fa niharan'ny herisetra sy fandrahonana. Novakian'ny polisy ihany koa varavarankely sy ny varavarana tao amin'ny tranobe.
Varavarana mankany amin'ny fahamarinana! nanao izany ny polisy nanafika ny DİHA. Mijery anareo izahay ary manara-maso anareo ao aoriana. # DontTouchDİHA -Nedim Türfent, Tonian-dahatsoratra amin'ny teny Anglisy ao amin'ny DİHA.
Mety antony iray nahatonga ny fanafihana ny asa mafy ataon'ny DİHA ao amin'ireo tanàna Kiorda izay nisongadina ny ady eo amin'ny vondrona mahaleotena Kiorda sy ny polisy. Naneho ny fikasany hanivana vaovao avy amin'ireo tanàna ireo ny AKP, tahaka an'i Cizre, Beytülşebbap, Hakkari sy Şırnak, ary mavitrika tanteraka ny sampam-baovao.
DİHA no loharanom-baovao be mpitia indrindra eo amin'ny Kiorda monina manerana izao tontolo izao ary maro hafa ihany koa no tsy matoky ny fampahalalam-baovao mahazatra. Efa voasivana indray mandeha ny tranokalany tamin'ny volana Jolay tao anatin'ny fanakatonana faobe efa notaterin'ny Global Voices teto. Nanomboka tamin'izay fotoana izay, efa nakatona in-20 mahery ny sehatra tahiry sy ny fitaratr'izy ireo.
Manambana basy eo amin'ny lohan'ny mpanao gazety
Ireo zavatra maro manafintohina indrindra ny mpanao gazety no porofo fanehoana ny zavatra ratsy indrindra vitan'ny governemanta amin'ny ady ifanandrinany tamin'ny haino aman-jery.
Mpanao gazetin'ny fahitalavitra Özgür Gun, Murat Demir sy ny mpanao gazetin'ny DİHA, Serhat Yüce no norahonana, nodarohana ary avy eo nampidirin'ny polisy tsy manao fanamiana imasom-bahoaka tany am-ponja, tao an-tanàna provinsialy Silvan ao atsinanan'i Torkia be mponina Kiorda no nitrangan'izany.
Raha niomana haka sary ny tanàna teo ambanin'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina izy ireo, nosakan'ny polisy teo akaiky teo ny fiarany, nanisy bala ny basiny ny polisy ary nanambana izany teo amin'ny lohan'i Serhat Yüce no sady nandrahona am-bava azy.
Inona koa ny manaraka?
Tsy mba asa mora mihitsy ny asa fanaovan-gazety ao Torkia hatramin'izay. Fandrahonana, daroka, fampijaliana na koa famonoana mpanao gazety mihitsy no lohahevitra malaza eo amin'ny tantaran'ny haino aman-jery Tiorka.
Mampahatsiahy ireo vanim-potoana maizina tanteraka teo amin'ny tantaran'i Torkia ny fanafihana haino aman-jery sy mpanao gazety ary niteraka tahotra teo amin'ireo gazety tsy miankina sy mpitsikera. Mampiseho ihany koa ny fisamborana ireo mpanao gazetin'ny VICE sy ny fandroahana an'i Frederike Geerdink fa tsy ny olom-pirenena Tiorka ihany no iharan'ny fanafihana fa ny fahalalahan-gazety ihany koa.
Sarotra ny maminavina ny ho avy any ho any, indrindra fa ao Torkia, izay nahitana fanamby marobe ara-toekarena sy ara-piarovana nampihemotra ny firenena sy nampiditra azy amin'ny herisetra izay taona vitsy lasa izay.
Saingy toa azo antoka fa hatramin'ny 1 Novambra, tsy hisy ny fandeferana, manana safidy amin'ny fanivanan-tena ny mpanao gazety na idiran-doza.
21 Jolay 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana